Dadka Sigaarka Caba Carruurta ay Dhaleen Oo Halis Ugu Jira Cudurro | Raadgoob
Dadka Sigaarka Caba Carruurta ay Dhaleen Oo Halis Ugu Jira Cudurro
Dadka waaweyn ee aan sigaarka cabin ayaa ku jira khatar dhimasho oo ka sarreysa sida caadiga ah haddii ay yaraantoodi ku soo ag koreen waalidkood oo sigaarka caba, sida lagu qeexay daraasad laga sameeyay Mareykanka.
Aqoonyahannada sameeyay cilmi baaristan ayaa sheegay in carruurta ay waalidiintood sigaarka ku cabaan agtooda ay inta badan marka ay weynaadaan la kulmaan cudurro uu jirkooda kula soo qabsado yaraanta, kuwaasoo uu sabab u yahay qiiqa sigaarka ee ay neef ahaanta u qaataan.
Cudurradaas ayaa ah kuwo waxyeello baahsan gaarsiiya sambabada carruurta maadaama ay aad daciif u yihiin waqtiga ay ilmaha da’dooda yar tahay.
Saameynta uu qiiqa ku yeesho sambabada ayaa ugu dambeyn isku baddasha xanuunka Cancer-ka oo aan la daaweyn karin.
Waxaa sidoo kale ka abuurma xanuunno dhanka wadnaha ah oo mararka qaar horseeda dhimasho deg deg ah.
Cudurradaas ayaan sida caadiga ah ku dhicin carruurta haddii aysan khatarta noocaas ah la kulmin xilliga ay korayaan, sida lagu xusay daraasadda.
Khubarada ayaa sheegay in habka ugu wanaagsan ee carruurta looga ilaalin karo khatartaas ay tahay in waalidiinta ay iska joojiyaan sigaar cabista.
‘In la fogeeyo sigaarka’
Hazel Cheeseman, oo u ololeysa arrimaha caafimaadka dhallaanka ayaa sheegtay in daraasaddaan ugu dambeysay ay sii kordhineyso walaaca ku aadan halista ka dhalata sigaar cabista.
“Cilmi baaristani waxa ay nagu sii dhiirri galineysaa inaan sii xoojinno ololaha ku aaddan in sigaarka lagu cabo bannaanka si carruurta loo ilaaliyo” ayey tiri.
Iyadoo hadalkeeda sii wadata ayey intaas ku dartay “Habka ugu wanaagsan ee carruurta lagu difaaci karo waa in waalidiinta ay iska joojiyaan sigaar cabista”.
Halis cimri daa’in ah
Carruurta ay waalidiintood sigaarka cabaan ayaa lagu yaqaannaa in uu ku dhaco cudurka neefta, iyo in ay sambabadooda ay si fiican u shaqeyn waayaan.
Daraasaddaan ayaa muujineysa in saameynta carruurta ka soo gaarta qiiqa sigaarka ay noqoto mid waligood la socota xitaa marka ay dad waaweyn noqdaan.
Cilmi baareyaasha ayaa daraasaddooda ku ogaaday in carruurta oo sigaarka lagu ag cabo ay kordhineyso labo arrimood oo kala ah tirada dhimashada iyo cudurrada ku dhaca sambabada.
Dr Ryan Diver oo ka mid ah dadka qoray warbixintaas ayaa sheegay in daraasaddaan ay tahay tii ugu horreysay ee lagu ogaado halista ballaaran ee ay carruurta kala kulmaan qiiqa sigaarka agtooda lagu cabo.